Miniature Circuit Breaker (MCB) Vagadziri & Vatengesi - China Miniature Circuit Breaker (MCB) Fekitori
DAB7-63 Nova Series Miniature Dunhu Rinopwanya (MCB)
Miniaturecircuit breakersDAB7-63Hare yakagadzirirwa kupa otomatiki magetsi sosi akachekwa-pasi pemvura yakawandisa Iwo anokurudzirwa kuti ashandiswe mumapoka emapaneru (furati nepasi) nemabhodhi ekuparadzira edzimba dzekugara, dzekumba, dzeruzhinji nedzemahofisi.
Zvinhu makumi matanhatu nesere pa8 zvakayerwa mafashama anotangira pa6 kusvika 63 A. Iyi MCB yakawanikwa ASTA, SEMKO, CB, CE chitupa.
DAB6 Series Miniature Dunhu Remagetsi (MCB)
DAB6-63 inoitirwa kuchengetedza kugovera uye masystem eboka ane mitoro yakasiyana:
- midziyo yemagetsi, mwenje - V hunhu switch;
- madhiraivha ane mwero ekutanga mafungu (compressor, fan group) - C hunhu switch;
- madhiraivha ane akakwira ekutanga mafungu (kusimudza michina, mapombi) - D mamaki switch;
Miniature circuit breaker DAB6-63 inokurudzirwa kuti ishandiswe mumagetsi ekuparadzira mapaneru edzimba dzekugara nedzeruzhinji.
DAB7N-40 Series DPN Mashoma Circuit Anotyora (MCB)
DAB7N-40 Series diki diki mudariki inotora zvakapetwa-poindi ye1P + N, iwo matanda maviri akaiswa insured uye akasarudzika kubva kune mumwe nemumwe, pasi pechinoenderana mashandiro, N-pole nguva dzose ichagadzira yekutanga uye kupwanya gare gare, iyo inovimbisa yemagetsi arc kutyora kugona kwe danda rakachengetedzwa, zvakare rinovimbisa kuchengetedzwa kwemaseketi anodzorwa nemidziyo yemagetsi.
Kunyorera DAB6-100 maficha akadai sekutarisika kwakapfava, kurema uremu, kugona uye kuvimbika kuita, kukwirira kwakawanda kugona, kukurumidza kugumburwa uye kukwirwa nechitima. Iyo yakavharidzirwa uye com-pendi inotora yakakwira-kudzora moto uye yekuvhunduka-kuramba mapurasitiki ekureba kwenguva refu. Inonyanya kushandira kudzivirira maseketi e AC 50Hz, 230V yedanda rimwe chete, 400V yematanda maviri kana matatu kana mana pakoreji kubva pakuwandisa kana pfupi-redunhu, uyezve nekugadzira kusingawanzo uye kuputsa zvigadzirwa zvemagetsi uye lig ...
DAB7-63 DC diki Dunhu Rinopwanya
DAB7 Series Miniature Dunhu Remagetsi (MCB)
Miniature redunhu mabhureki DAB7-63H anoitirwa kupa otomatiki magetsi sosi-akacheka pasi peakawandisa mafashama Iwo anokurudzirwa kuti ashandiswe mumapoka emapaneru (furati nepasi) nemabhodhi ekuparadzira edzimba dzekugara, dzekumba, dzeruzhinji nedzemahofisi.
DAB7-125 Series Miniature Dunhu Remagetsi (MCB)
Zvezvinangwa zveindasitiri nekutengesa
Magetsi Ekuparadzira zvido zviri kuramba zvichichinja munzvimbo dzekugara, dzekutengesa uye dzeindasitiri. Yakavandudzwa kuchengetedzwa kwekushanda, kuenderera mberi kwebasa, kurerukirwa kukuru uye mutengo wekushandisa zvakafunga zvakakosha. Miniature Circuit Breaker akagadzirwa kuti arambe achigamuchira kune izvi zvichichinja zvinodiwa.
DAB7-100 8kA MCB Chinja Chidiki Sedunhu Rinotyora
Iyo DAB7-100 diki wedunhu mudariki inovandudzwa chaizvo kune GB 10963 uye IEC60898 zviyero. Iwo ma breaker wedunhu anozvirumbidza yakasarudzika kugadzikana, pfupi dunhu chengetedzo, zadzisa kuchengetedzwa, ipfupi kuvhura nguva, uye yakakwira kutyora chinongedzo chinongedzo zvese mune imwe diki dhizaini
Iwo ma breaker wedunhu akaisirwa kuitira kuwandisa kuchengetedzwa kwevanobata, kudzosera, uye zvimwe zvigadzirwa zvemagetsi
Main mabasa: pfupi wedunhu chengetedzo, zadzisa kuchengetedzwa, uye magetsi kupatsanurwa.
MCB Pasi Pemagetsi Kuburitswa
Pasi pemagetsi kuburitswa
Iyo yakatarwa voltage ndeye 230V uye 400V zvichiteerana. Kuburitswa kuchapwanya iyo breaker breaker kana iyo chaiyo voltage iri pakati pe70% Ue-35% Ue; kuburitswa kunodzivirira iro redunhu breaker kubva pakuvhara kana iyo chaiyo voltage iri pazasi pe35% Ue; iyo kuburitsa ichavhara iyo redunhu breaker kana iyo chaiyo voltage iri pakati pe85% Ue-110% Ue.
MCB Shunt Kusunungurwa
Rated control source voltage (Us) yeDAB7-FL shunt kuburitswa iri AC50Hz uye 24V kusvika 110V, 110V kusvika 400V, DC 24V kusvika 60V, 110V kusvika 220V, kana iko ikozvino magetsi ari kubva 70% Isu kusvika 110% Isu, iyo shunt kuburitswa kuchaita zvakavimbika uye kutyora wedunhu mudariki.
C45 4P Miniature Dunhu Rinopwanya
Kunyorera C45 kunoshanda kune tambo ye AC 50Hz / 60Hz, 230V mudanda rimwe, 400V iri mbiri, nhatu, matanda mana ekudzivirira kuwandisa uye dunhu pfupi, uye yakayerwa parizvino kusvika pa63A. Inogona zvakare kushandiswa kune isingawanzoitika mutsetse kutendeuka pasi peyakajairika mamiriro. Iyo breaker inoshanda kuendesa magetsi kugovera system muindasitiri bhizinesi, yekutengesa dunhu, yakakwirira-simuka chivakwa uye imba yekugara. Inoenderana nematanho eIEC60898. Main technical Parameter Rudzi C45 Pole 1 ...
C45 3P Miniature Dunhu Rinopwanya
Kunyorera C45 kunoshanda kune tambo ye AC 50Hz / 60Hz, 230V mudanda rimwe, 400V iri mbiri, nhatu, matanda mana ekudzivirira kuwandisa uye dunhu pfupi, uye yakayerwa parizvino kusvika pa63A. Inogona zvakare kushandiswa kune isingawanzoitika mutsetse kutendeuka pasi peyakajairika mamiriro. Iyo breaker inoshanda kuendesa magetsi kugovera system muindasitiri bhizinesi, yekutengesa dunhu, yakakwirira-simuka chivakwa uye imba yekugara. Inoenderana nematanho eIEC60898. Main technical Parameter Rudzi C45 Pole 1P ...